Eken’ireo Mpanao Famotorana ao St. Petersburg Ny Hamerenana Mandinika ireo Fiampangàna Halabato · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2017 16:26 GMT
Sary: Yegor Tratnikov / Facebook
Tsy mateti-pitranga ao Rosia izany, fa neken'ny polisy ny hanadihady ny raharaha mety ho fisianà halabato nandritra ny fifidianana tamin'ny volana Septambra lasa teo. Milaza i Yegor Tratnikov, kandidà izay namoy ny hazakazany ho an'ny seza maharitra ny fe-potoana iray any amin'ny antenimiera mpanao lalàna any St. Petersburg, fa biraom-pifidianana iray no nanao tetidratsy taminy, mba hanolorana ny vato ho an'ny fahavalony, Alexander Yegorov.
Mpikambana avy ao amin'ny farany havanana, antoko tsy dia mendrika ny ho antsoina hoe Antoko Demoktratika Liberalin'i Rosia (LDPR) natsangan'i Vladimir Zhirinovsky, i Tratnikov, politisianina nasionalista malaza ratsy izay vao tamin'ity Alarobia ity no nandrahona ny mpanohitra taminà famonoana faobe, raha toa ka mandresy amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy amin'ny taona manaraka. Na teo aza ny kabary tsara lahatra hentitra nataon'ny LDPR, ny anarany fotsiny no maha-mpanohitra an'ilay antoko, ary amin'ny ankapobeny dia manohana ny hetsik'i Vladimir Putin.
Milaza i Tratnikov fa manana sary avy amin'ny lahatsary fanaraha-maso izay manaporofo fa namela ny fanasesehana vato tsy ara-dalàna ny biraom-pifidianana laharna fahadimy tao St.Petersburg, araka ny tranonkalam-baovao Fontanka.ru.
”Niditra tamina tetidratsy nifanaovan'izy samy izy ireo mpikambana tamin'ity vaomiera [fifidianana] ity. Ireo mpifidy, manao ny asa amin'ny anaran'ireo mpikambana ao amin'ny vaomiera, dia imbetsaka nameno ireo vatom-pifidianana […] ary nandrotsaka azy ireo manokana tao amin'ny vata fandrotsahana vatom-pifidianana mba hanaovana hosoka amin'ny valim-[pifidianana],” hoy i Tratnikov.
Raha oharina amin'ny fifaninanana tamin'ny 2011, nanatsoboka vato mihoatra ny 700.000 ny taham-pahavitrihana ho an'ny fifidianana antenimiera mpanao lalàna ho an'i St. Petersburg tamin'ny 2016, ny 32 isan-jaton'ny mpifidy azo fidiana. Samy nihena ihany koa ny taham-pahavitrihana nanerana ny firenena, tamin'ny fifidianana antenimieran-dalàna eo an-toerana federaly.
Tamin'ny volana Septambra lasa teo, tamin'ny Androm-pifidianana, nanara-maso ny fifidianana tany amina biraom-pifidianana maro manerana ny firenena ny mpanao gazety avy amin'ny Reuters, raha araka ny fijoroany vavolombelona dia nisy tranga maromaro nahitàna famenoana vatom-pifidianana sy taham-pahavitrihana mibontsina. Taty aoriana dia nanafoana ny voka-pifidianana tany amina biraom-pifidianana miisa sivy ireo manampahefana amin'ny fifidianana Rosiana, niainga tamina tatitra mikasika fifidianana tsy manara-dalàna.
Tratnikov, mpikambana LDPR, sy i Yegorov, solombavambahoaka avy amin'ny Just Russia, dia samy avy aminà antoko politika mpibahan-toerana, manana solontena ao amin'ny Duma-mpanjakàna. Ireo antoko mpanohitra ”tsy ara-drafitra”, toy ny Parnas sy Yabloko, dia tsy nandingana ny fetra ambany indrindra hahazoana toerana ho ao aminì'ny antenimeran-dalàna tao anatin'ireo fifidianana maro teo aloha. Voajirika, niharan'ny herisetra ihany koa, ireo mpikambana tao amin'ny Parnas ary ny filoha mpiara-mitondra, Boris Nemtsov, aza dia nisy namono tamin'ny Febroary 2015.
Tamin'ny fifidianana parlemanteran'i Rosia tamin'ny 2011, ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny Fikambanana ho an'ny Fiarovana sy Fiarahamiasa any Eoropa dia nahita ”fomba fanatanterahana fandikàn-dalàna matetika sy tranga toa fanodinkodinana, anisan'izany ny famantarana lehibe maromaro mahakasika famenoana vatam-pifidianana.” Tratra tao anaty lahatsary ihany koa ny fandikandalàna maro.
Niteraka ny hetsi-panoherana lehibe indrindra tao anatin'ny folo taona mahery ny halabato hita niharihary tamin'ny fifidianana parlemantera tany Rosia tamin'ny 2011, na dia nahazo fe-potoana fahatelo aza i Vladimir Putin, fe-potoanm-pitondràna tsy nifanesy tamin'ny lohataona manaraka.